Shina Focus RF Anti Wrinkles Machine mpanamboatra sy mpamatsy | MENOBeauty
Masinina RF Anti Wrinkles mifantoka
40.68mhz Teknolojia Monopolar Focus RF
Thermolift miaraka amin'ny Vacuum ho an'ny tarehy, maso
Handlepiece Pic asa
Unipolar RF mampiasa angovo Unipolar RF hanafainganana ny metabolisma amin'ny tavy adipose, hita miharihary ny hoditra. manome ny angovo RF mifantoka amin'ny sosona lalina amin'ny hoditra tsy misy mahazo aina amin'ny marary.
Vacuum RF Ny BiPolar RF miaraka amin'ny angovo tsiranoka dia miteraka fanamainana dermal eo an-toerana sy ivelany
Ny toetran'i Thermolift dia manasongadina Dielectric Heating- mekanika miavaka iray izay ananan'ny radiofrequency avo lenta (RF) 40,68 MHz (mandefa signal 40,68 tapitrisa isan-tsegondra) dia ampitaina mivantana amin'ny sela, ka miteraka fihodinana haingana ny molekiola ao anaty rano. izany
ny fihodinana dia miteraka disadisa izay miteraka hafanana mahery vaika sy mahomby. Satria ny hoditra dia rakotry ny rano ny ankamaroany, ny fanafanana avy amin'ity mekanika ity dia miteraka fihenan'ny volumetrika ao anatin'ny hoditra- mifaoka ireo kofehy efa misy ary manentana ny
fananganana collagen vaovao ary manatsara ny hateviny sy ny fampifanarahana azy. Ny hafanan'ny RF avo lenta dia mamela hafanana lalina, homogenous izay mamokatra valiny mitovy.
● Ny maody RF roa dia mamokatra hafanana ara-pahasalamana ao anatin'ny sela kendrena amin'ny fomba roa:
Ny angovo BiPolar RF dia mamorona fanafanana dermal eo an-toerana sy ivelany
Ny teknolojia UniPolar dia mamoaka angovo RF mifantoka amin'ny sosona lalina amin'ny hoditra tsy misy mahazo aina amin'ny marary.
● Teknolojia In-Motion ™
Ny teknolojia in-motionTM dia maneho ny fandrosoana amin'ny fampiononana ny marary sy
hafainganam-pandeha, miaraka amin'ny valim-pitsaboana azo averina. Ny hetsika mihetsiketsika
Ny teknika dia mitaky ny famindrana ny mpangataka hatrany amin'ny faritra kendrena,
mampihatra angovo amin'ny takelaka lehibe hanamboarana ny endrik'ireo faritra midadasika.
Ny in-motion dia manome hafanana miadana tsikelikely ao anatin'ny sela kendrena mandra-pahatongan'izany
mahatratra mari-pana ara-pahasalamana, manome fitsaboana mahazo aina kokoa
tsy atahorana handratra.
Teo aloha: Masinina Vacuum Physiotherapy Diathermy RET CET
Manaraka: Fitaovana RF kely miaparitaka